अन्यायविरुद्धको जवाफ हो, रेशम चौधरीको विजय – JANAMATPOST.COM :: NEWS FOR ALL
अन्यायविरुद्धको जवाफ हो, रेशम चौधरीको विजय
२०७४, ३ पुष सोमबार ०४:३५
ऐतिहासिक प्रदेशसभाको निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक हुँदैजाँदा नेपाली जनताको ध्यान कैलाली टिकापुरले फेरी एकपटक जवरजस्त तानिरहेको छ । गणतन्त्र स्थापनागर्न १७ हजार युवाहरुले बली चढ्नुप¥यो । बयलगाडाको कचिङ्गल झिकेर कोही नेताहरु विवादित कुरा गरिरहदा कार्यकर्ताले सडक नछाडेको करण गणतन्त्रको पल्ला भारी भयो । दुई पटकको संविधान सभाको निर्वाचनपछि बनेको संविधान कार्यान्वयनसँगै भएको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको बिजय हाँसिल गरेको छ । वाम गठबन्धनका नेताहरुको हातमा राज्यको बागडोर जानैलाग्दा कैलालीले नेपाली मन तानिरहनुपर्ने यो के भइरहेकोछ ?
बिषय हो, कैलाली—१ बाट प्रतिनिधिसभाको निर्वाचित रेशमलाल चौधरीको विजय । कैलाली घट्ना आरोपमा परेका चौधरीले ३४ हजार ३४१ मत ल्याएर विजय भए । प्रतिद्वन्द्वीलाई २० हजार ९३५ को बिशाल मत अन्तरले पराजित गरेका चौधरीले निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचित प्रमाणपत्र पाएका छैनन् । नेपाली सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालहरुमा ब्यापकता पाइरहेको बिषयमा केही लेख्न उत्प्रेरित गरायो ।
पक्कैपनि २०७२ भदौ ७ गतेको कैलालीको टिकापुर घट्ना अप्रिया थियो । घट्नामा एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित सात प्रहरी र एकजना बालकको मृत्यु भएको थियो । त्यस घट्नाले सारा नेपालीलाई स्तब्द बनाएको थियो । नेपालप्रति चासो राख्ने विश्व राजनीतिक वृतमा ध्यान केन्द्रित गराएको थियो । त्यो घट्नाले ।
अकस्मात भएको दुःखद घट्नापछि हजारौ थारुहरुले घर छाड्न बाध्य हुनुपरेको थियो । घट्नापछि धेरैको घर भत्काइएको, आगो लगाइएको थियो । वनबास लाग्नुपरेको थारु नेताहरुले राज्य आफै लागेर समुदायमै आतंकित पारिरहेको भन्दै आवश्यक छानविनको माग गरेका थिए । धमाधम झुटा मुद्धाहरु दायर भइरहेकोमा थारु समुदाय आक्रोसित बनिरहेका थिए । नेपाली मिडियाको साथ नपाएका थारुहरुले आन्तरिक रुपमा आफूहरु राज्यद्वारा घोर अन्ययमा परेको बताइरहेका थिए । सार्वजनिक कार्यक्रमहरु मार्फत जवरजस्ति लगाइएको झुटा मुद्धा फिर्ता गर्न माग गरिरहेका थिए । सरकारले रेशम चौधरी परिवारलाई १ करोड ७४ लाख क्षतिपूर्ति दिइनुबाट पनि घट्नाको पुष्टिहुन्छ । त्यँहा ज्यादती कम भएको थिएन । घट्नापछिको एक चरण द्वन्द्व समाधान गर्नेतिर भन्दा प्रतिशोध लिनेतिर उद्धत भएको कुरा घट्नाक्रमले दर्शाउथ्यो ।
कैलाली घट्नापछि थारु समुदायले शान्तिपूर्ण रुपमा राज्यले दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । आवश्यक सुनुवाइ भएन । मधेस, थरुहट, किरात, लिम्बूवान, मगर, गुरुङ, तामाङसालिङ्गबाट चर्को दवावपछि प्रचण्ड सरकारको पालामा २०७४ जेठ ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले थरुहट र मधेस आन्दोलनलाई राजनीतिक घट्नाको रुपमा लिदै मुद्धा फिर्ता लिने निर्णय भयो । धन्यवाद छ, प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदलाई । सरकारले गरेको निर्णयको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव नित्यानन्द ताजपुरियाले विज्ञप्ति प्रकाशन गरेरै स्वागत गरेका थिए । तर, सरकारको निर्णय कार्यान्वयन भएन । घट्नामा संलग्न भएको आरोपमा लक्ष्मण थारु लगायतका दर्जनौ जेल जीवन विताउन बाध्यछन् ।
राज्य आफै लागेर थारु समुदायमाथि भइरहेको अन्ययको जवाफ रेशम चौधरीको विजय बनेर आएको छ । यो विजय राष्ट्रिय जनता पार्टी(राजपा)को मात्र विजय होइन । यो विजय व्यक्ति रेशम चौधरीको मात्र पनि होइन । कैलालीको थारुबस्तिबाट आएको जवाफ नेपालमा नयाँ ढंगको क्रान्ति चाहने आमूल परिवर्तनकामी जनताको विजय बनेर आएको छ । कैलाली—१ का आम जनतालाई सेवा छ, सेवारो छ, जाजोलोपा, झोर्ले, रामराम छ । अनि सलाम छ, उत्पीडन विरुद्ध चट्टानभएर उभिन सिकाउने रेशम चौधरीलाई ।
राज्य आज निर्वाचन आयोग बनेर रेशम चौधरीको बिजयलाई झन्जट दिन, सकेसम्म विजय अस्वीकार गर्न खोजिरहेको त छैन ? उत्पीडितको मुद्धा दरपिठमा ढिलासुस्ति गर्ने अदालत आफै लागेर के गर्न खोजिएको हो ? कैलाली १ नम्बर क्षेत्रका मुख्य निर्वाचन अधिकृत खिमानन्द भुसाललाई प्रश्न छ, त्यहाँ रेशम चौधरीको विजय हो की, निर्वाचन आयोग केन्द्रीय कार्यालयको ? निर्वाचित प्रमाणपत्र पोका पारेर राजधानी बढाउनु भन्ने कुन कानूनमा उल्लेख छ ?
जुनसुकै घट्नामा मान्छे मारिनु अपराधि घट्ना नै हुन्छ । ६० जना मधेसीको छाँतीमा कस्ले गोली बर्षायो ? मधेसी युवा हत्याको छानविन कहाँ भइरहेको छ । कतिजनाले कारबाही भोगिरहेको छ ?
रेशम चौधरी विजयपछिको घट्नाले थुप्रै पश्नहरु जन्माएका छन् । के रेशम चौधरी, लक्ष्मण थारु, धनिराम चौधरीहरुले व्यक्तिगत लाभका लागि आन्दोलन गरेका थिए ? व्यक्तिगत लाभको लागि आन्दोलन गरेको प्रमाणित गर्न सकिन्छ ? मधेस आन्दोलन नेपाललाई टुक्र्याउनको लागि भएको थियो ? मधेस(२ नम्बर प्रदेश)मा मधेसवादी दलको एकलौटी सरकार बन्ने भएको छ । त्यँहा नेपाली मन कमजोर भएको स्वीकार हुन्छ ?
शेरबहादुर देउवा सरकार प्रचण्ड नेतृत्वले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गरेर रेशम चौधरीलाई जनताले जिताएको प्रमाणपत्र हस्तान्त्रण गर्न निर्देशन चाहियो । वाम गठबन्धनका नेताद्वय केपी ओली र प्रचण्ड, रेशम चौधरीको विजय स्वीकार्न निर्वाचन आयोगलाई सल्लाह दिन किन ढिला गर्ने ?
होइन रेशम चौधरीको विजयलाई सबै मिलेर सानोतिनो झन्जटमा फसाइन्छ भने हात्तिको चपाउने दाँत देखिनेछ । राज्य संचालकहरुको बास्तविक चरित्र झल्किने छ । प्रदेशहरुको नामाकरणमा ध्यान पुगेन भने आमूल परिबर्तनको अर्को विद्रोहको जग बन्न सक्छ चौधरी काण्ड ।